လူသားအားလုံးအတွက်: အဂန်း အဂန်း ၊ အဂန်း အန် အဂန်း
လူဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စားပြီး အမုန်းခံတတ်တဲ့သတ္တ၀ါ တစ်မျိုး ပါပဲ။ ကျွန်တော်က အဲဒီထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက မနေတောင် အောက်ဆုံးကတော့ မဟုတ်တာ သေချာတယ်။ဘာလို့ ဒီလို ပြည့်မေတ္တာခံယူဖို့ စကားပလ္လင် ခံနေရသလဲ ဆိုတော့ကာ……
မကြာသေးခင်က ပေါ်ထွက်လာခဲ့ တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် စကားပြောတဲ့ ရုပ်သံ ဖိုင်ကြောင့် အဲဒါကို ခဏခဏ ကြားနေရတော့ စိတ်အချဉ်ဖောက်လာတော့ တာပါပဲ။ ဘာတဲ့ အဂန်း အန် အဂန်း အဂန်း အန် အဂန်း…. ဘာပြောတာလဲ ဗျ။
လူကလဲ အကုသိုလ်များလေတော့ ပညာကံ မွဲသဗျ။ သူက အဲဒီမှာ မြန်မာ စကား ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ ၊ မြန်မာလိုပြောလဲ နားလည်မဲ့ လူတွေမှ မဟုတ်တာကိုး ၊ သူက ဘိုလို မှုတ်တာဗျ အဲထားတော့ သူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး ။ တတ်သလောက်မှတ် သလောက် ဘာသာပြန်ကြည့်တယ်၊ ဘာတဲ့…. သူပြောတဲ့ အဖွဲ့ကြီး ၊ အဲဒါကြီးက ဘယ်သူတွေကို ကျတော့ ဘယ်လို လုပ်ပေးပြီး ဘယ်သူတွေကို ကျတော့ ဘယ်လို လုပ်မပေးရကောင်းလား ဆိုပြီး ရန်တွေ့သလိုလို အလိုမကျ သလိုလို၊ ငယ်ငယ် တုန်းကတော့ ကလေးတွေရှိတတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခုမြင်ဖူးတယ်၊ သူ့အဖေက သူ့ကို သကြားလုံး မပေးပဲ သူ့အစ်ကိုကို ပေးတာကို အပြစ်ပြောပြီး ကြူကြူပါအောင် ငိုတော့တာပဲ။ သူ့ခဏခဏ ချောင်းဆိုးတတ်တာကို အဲဒီကလေး မေ့နေလေရော့ သလား…သူ့အဖကတော့ ဒီကလေး ခဏခဏ ချောင်းဆိုးတတ်တာ သိနေတာကိုး ။ အခုပြောတဲ့ မိန်းကလေးက လဲ မိန်းမကြီးတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ထားတော့……..။
နိုင်ငံရေးကို စိတ်မ၀င်စားဘူး မလုပ်ဖူးလို့တော့ ပြောချင်ပြောဗျာ။ ကျွန်တော် နားမလည် တာတွေ မသိတာတွေက များတာကိုး ကွန်မြူနစ် ဖဆပလ န၀တ ဒီမိုကရေစီ စစ်အစိုးရ အဲဒါတွေ ကိုကြားဖူးယုံလောက်ပဲ ရှိတာ။ ဘာတစ်ခုကိုမှ ထဲထဲ ၀င်ဝင်မသိဘူး။
ကြွားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး အဲဒါတွေကို နားလည်သလောက် ကြားဖူးသလောက် ပြောပြရရင်....… ကွန်မြူနစ်ဆိုတာတဲ့ အဖေလဲမရှိ အမေလဲမသိ ကိုယ့်အကျိုး အတွက် ဆို အဖေတွေ အမေတွေလဲ သတ် ၊ သေပြီးနောက်ဘ၀ဆိုတာလဲ မရှိဘူး။ ဖဆပလ ဖက်ဆစ်လွတ်မြောက်ရေး ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး ၊ ရုပ်ရှင်တွေ ထဲမှာ ကြည့်ဖူးတယ် ဂျပန်တွေကို တော်လှန်တယ်၊ န ၀ တ ကြားဖူးတာ နဝေတိမ်တောင်၊ ဒီမိုကရေစီ ပြည်သူက တင်မြှောက် လေးနှစ်တစ်ကြိမ် သမ္မတပြောင်း ကြိုက်ရင် ဆက်လုပ်၊ ဒါကျွန်တော်သိတာ အကုန်ပဲ။ ဒါကျွန်တော့် ဦးနှောက်ထဲမှာ နေရာ ယူထားတဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေဗျာ။
အဲ အထက်က အဂန်း ကိစ္စ ပြန်ဆက်ရအောင်။ ဂန်း ဆိုတာ သေနတ်ပဲ သိတယ်ဗျာ။ ငယ်တုန်းက ကျောင်းမှာ ဆိုဖူးတာ အဂိန်း ၊ ဘာတဲ့ နောက်တစ်ဖန် ဆိုလား၊ ကေတွေက ခေသံထွက် ကြူတွေက ခယူသံထွက်၊ ဇက်တွေကို ဇီလို့ဆို ဒီလို သင်ကြားတဲ့ စနစ်မျိုးတော့ မကြုံဖူးခဲ့ဘူးဗျာ။ အဲဒီတော့ အဂန်းဆိုတဲ့ အသံ ကြားရင် ဂန်းဆိုတဲ့ သေနတ်ပဲ နားလည်တယ်ဗျာ သေနတ်တစ်ခု ပေါ့လေ ။ ဆိုတော့ကာ သူက အဂန်းအဂန်းဆိုတာ ကြီးကို ကျွန်တော်ထင်တာက နားမလည် ပါးမလည် ပြည်သူတစ်ချို့ကို ဂန်းဆိုးတဲ့ သေနတ်ကြီးနဲ့ တစ်ဖန်တစ်လဲလဲ အပစ်ခံ ခိုင်းနေတယ်လို့ပဲထင်တယ်။ အခုတောင် သူ့ပါးစပ် သေနတ်မှာ ကျွန်တော် နှလုံးသား သေဆုံးနေတာကိုး။
ကျွန်တော်က နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ကောင် ဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ ပြောသလို နိုင်ငံသားပေါ့ဗျာ၊ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဗျာ။ အထင်တော့ ကြီးမသွားနဲ့ဦး။ ကျွန်တော်က လူနည်းစု နိုင်ငံရေးသမားတွေ မြင်သလို စစ်အစိုးရကို တော်လှန် ပုန်ကန် ဆန္ဒပြ တာတွေ မလုပ်တတ် မလုပ်နိုင် မလုပ်ရဲပေါင်၊ ဒီတော့ ကျွန်တော် အရင်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး အချို့ ပြော မယ်ဗျာ။ ကိုယ့်ဦးနှောက်နဲကိုယ် ခံယူထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပေါ့လေ။
တောကနေ မြို့တက်လာတော့ ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ ရွှေမြို့တော် ကြီးကို ရောက်တယ်ဗျာ။ အဲဒီ မှာ လိုင်းကားနဲ့တွေတာ ပဲ ကားထဲက လိုင်းတွေလဲ မြင်ရတယ်၊ ဒီလိုဗျာ ကောင်မလေးက ငယ်ငယ်ချောချောလေး ဒါထက်မြင်သာအောင် ပြောရရင် ဗျာ ကောက်ကောက်မို့မို့ ၊ လုံးကြီးပေါက်လှ အလုံးကြီးတာကိုသာ ရူပါရုံ ဖြင့် တဏှာ မပါ ရှုမှတ်ဖူးသည် ကျန်တာတော့ မသိ။ (ရိုင်းသွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ)။ သူ့တို့ကို ကျွန်တော် မစုံစမ်းမထောက်လှမ်းဖူး ကိုယ်နဲ့မှ မဆိုင်ပဲလေ၊ ရွာမှာ အမေက မှာတယ်ဗျ “သားကြီး ရန်ကုန်မြို့ကြီးရောက်ရင် ဘတ်စ်ကားတွေ ထဲမှာ ကောင်မလေးတွေ နောက်က မရပ်နဲ့ မတော်ရင် ဘ၀တုံးနိုင်တယ်”တဲ့၊ အမေ့သားလှ အမေ့စကားကို မြေ၀ယ်မကျ လေထဲမှာတင် ဖမ်းနားထောင်တယ်။ လုံးဝဆိုလုံးဝပဲ ။ လူကြပ်နေရင် တတ်နိုင်သလောက် သူတို့ရပ်လို့ရအောင် နေရာပေးတယ်၊ အဲ ထိုင်ခုံနေရာ လေးများ ရရင်တော့ သူတို့ကို နေရာမပေးဘူးဗျ ၊ ရဟန်း သီလရှင် အဘိုးအဘွားအို ကလေးသူငယ် ဗိုက်ကြီးသည် အတွက်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါ ကားပေါ်မှာ လုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေး။ နိုင်ငံ့သားကောင်းပီသချင်လို့ မြန်မာလူမျိုး ယဉ်ကျေးတယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ အမှတ်ပေးနိုင်ဖို့။
မှတ်တိုင်ရောက် ကားအောက် ဆင်းရင် မှတ်တိုင်က ခုံတွေရဲ့ အပေါ်တွေ အောက်ခြေတွေမှာ ကွမ်းတံတွေး မထွေးဘူး၊ ကျွန်တော် ကွမ်းကို ဘယ်လောက် စားကြောင်း ခင်မင်သူတွေ သိပါတယ် ။အခု ဒီစာနဲ့ အရွဲ့တိုက် ပေါက်ကွဲ နေစဉ် တောင် ကွမ်းလေးမြုံ့ပြီး ရေးနေတာဗျ။
ပလတ်စတစ်ခုံ ရောင်စုံလှလှလေးတွေကို ခြေထောက်နဲ့ မကန်ဘူး။ ရှင်းတယ်လေ ဒီခုံတွေကို ဘုရားသခင်က မိုးပေါ်က ချပေးတယ်လို့ လုံးဝကို ယုံလို့ မရတာ ။ ဒါဆို နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲက လုပ်ပေးသလား ဝေးသေး .....အဲဒါ ကျွန်တော့်တို့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ် ရှာစားပြီး အခွန်ဆိုတဲ့ ငွေပေးထားလို့ အဲဒီ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ၀ယ်ထားတာ (မှန်ချင်လဲ မှန်မယ် သေချာမသိ) ဆိုတော့ကာ ကျွန်တော်တို့ မြို့ နိုင်ငံ လှပသာယာအောင် ကျွန်တော်တို့ ချွေးတွေနဲ့ ပေးဆပ်ထားတာဗျ ။ ဒါက ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံ့ အရေး နိုင်ငံရေးပေါ့ဗျာ (ငြင်းလိုက ငြင်းနိုင်ပါသည်) ။ တစ်ချို့ခုံတွေဆိုရင် ဗျာ သိသာပါတယ် ဖင်ထိုင်ရုံနဲ့ ဒီလောက်ကျိုးပဲ့စရာ အကြောင်းမှ မရှိတာ။ ဒါကြောင့်လဲ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်း ဖျက်ဆီးရင် တရား ရင်ဆိုင်ရတယ် ဆိုတာ အဲဒီလို ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းကို ကိုယ်ပြန် ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့ ခပ်ပိန်းပိန်းလူတွေ ကြောင့်များလား ။ ရွာမှာတုန်းက ဆိုရင်လည်းဗျာ ကျွန်တော့ရပ်ကွက် ရွာ မြို့ကို ချစ်တယ်။ သာရေး နာရေး ရပ်ရေး ရွာရေး ရှေ့ဆုံးမရောက်တောင် နောက်ဆုံးက မဟုတ်ဘူး။ လမ်းခင်း မြောင်းဖေါ် သန့်ရှင်းရေး လုပ်အားပေး အလှူ မသာ အားလုံးမှာ ကျွန်တော်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရွာကိုယ့်မြို့ သန့်ရှင်း ကျန်းမာ လှပစေချင်တယ်၊ ဒါကိုလဲ နိုင်ငံသားတစ်ယောက် နိုင်ငံ ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုမှာ နိုင်သလောက်လေး လုပ်နေတယ်လို့ ပဲ ခပ်မှိန်မှိန် ဥာဏ်နဲ့ ချိန်ထိုးဖူးတယ်။ ရန်ကုန် မြို့ကြီးရောက်မှဗျာ...........။
ထားတော့ ညစ်တွန်းပြီး ရေးတဲ့စာဆိုတာ စာဖတ်ရတဲ့သူကို ကိလေသာညစ်ညူး အဆိပ်သင့်လူးစေတယ်။ တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ။
ဘာ အရေးတော်ပုံ ညာအရေးတော်ပုံ ဘာသပိတ် ညာသပိတ် ဘာလှုပ်ရှားမှု ညာလှုပ်ရှားမှု ဘာဘာ ဘာမှ မသိ။အခု အစိုးရကို မှန်တယ်လို့ လက်ညိုးထောင် ခေါင်းညှိတ် မလုပ်သလို၊ မြန်မာ့ အရေး လှုပ်ရှားသူတို့ ၊ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ တို့ကိုလဲ မိုးပေါ်က လေကို လက်သီးနဲ့ ထိုးပြီး အားမပေးပါဘူး။
ရှေ့က ဦးမဆောင် နောက်ကမလိုက်လို့ လွယ်အိတ်လို့ ခင်ဗျားတို့ကို ၀န်လေး စေတယ်ပဲပြောပြော။ အရှေ့ မသွား နောက်မဆုတ်ပဲ ပြူးကြောင်ကြောင်နဲ့ ဘေးတိုက်သွားတဲ့ ဂဏန်းလိုကောင်ပဲပြောပြော။
မျှော်စင်ညီနောင်က နေ လူမသိသူမသိ (အများကြီးကို အသိမပေးပဲ) သည်းထိတ်ရင်ဖို ရသကို ခဏခဏ အချိန်ကုန်လူပန်း ငွေကုန်ခံပြီး ခံစားနေသူတွေ အများကြီးပါ။
လော်နောက်က လေမှုတ်ပြီး အသက်ကယ် အစုံအလင် နဲ့ တစ်ချက်လောက် လေဟုန်စီးတာကို နိုင်ငံရေး ခေါင်းစဉ်တပ် ၊ တဂန်းဂန်းနဲ့ နားကြားပြင်း ကပ်လွန်းလို့ နောက်တစ်ခေါက်များ ဂန်းသံ ကြားရင် ကျွန်တော် ဂန့်သွားမယ် ဆိုရင်လည်းဗျာ။
Posted by မိုးယံ at 2:05 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ကောင်းတယ် သရော်စာလေး ကောင်းတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ မမေပယ်လ် ကျွန်တော်မိုးယံရေးပါသည်။ ဂွီ
မိုက်တယ်၊ ဒါမျိုး မရေးတတ်လို့သာ။ တော်တယ် ရေးထားတာ။ ပုံမှန်လူအများစုကတော့ ဒီလိုခံစားကြရတာပဲ။ ဘယ်ဘက်မှ မယုံရဲတဲ့သူတွေပေါ့။
အိုင်ဒီယာကို သဘောကျပါသည်။ ကြိုက်၏။
ဖတ်ပြီးမနေနိုင်တော့လို့ကွန် မန့်ဝင်ရေးသည်